I-Sailaway ikhefu eligqibeleleyo lothando
I-Sailaway igugu lokwenyani, ilungele ikhefu lothando, istudiyo soqobo somculi odumileyo waseNorfolk Broads uCharles Mayes Wigg ibekwe entliziyweni yepaki yesizwe yaseNorfolk Broads indawo yobuhle bendalo.
Ipatio yabucala enendawo yokuhlala ekhuselweyo ngaphandle phantsi kweveranda entle.
Ibhedi enkulu yenkosi.
Igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese.
Ibhedi yesofa kabini yabantwana.
Indawo yokuhlala yonke kumgangatho ophantsi.
7.1 INkqubo yeCinema yasekhaya ene-55inch enkulu ye-LED screen TV.
Iseva yeSpotify kunye neNapster yokusasaza umculo yasimahla.
I-DAB kunye nerediyo ye-Intanethi.
Ikhonkco leBluetooth kwinkqubo yomsindo.
Ukukhanya kwemowudi ye-LED.
Zonke iinkqubo zilawulwa nge-iPad touch screen ulawulo.
IBarton Turf yindawo ethandekayo, encinci, engonakaliswanga ilali. Inesiteyitheli sayo kunye nendawo yesikhephe enika ufikelelo oluthe ngqo kwiBarton Broad iNational Nature Reserve. Ilali ngokwayo inezindlu ezininzi ezintle kwaye kukho ilali eluhlaza enechibi. Ilali izolile kwaye izolile. Icawa imalunga nekhilomitha ukusuka kwilali kwaye kufanelekile ukuhamba ngosuku oluhle. Eyona venkile ikufutshane kunye ne-pub IHashe eliMhlophe lise-Neatishead, malunga ne-20 mins ukuhamba. Barton staithe, eyindawo enoxolo yokuxhoma isikhephe sakho. Zonke iintlobo zezikhephe zifowuna kwi-staithe, kubandakanya i-wherries, iiyachts kunye nabakhenkethi, kwaye yindawo entle yokonwabela ipikniki okanye ukuloba ngorhatya okuzolileyo. Kukho indawo kuphela yezikhephe ezimbalwa, kodwa kukho indawo eninzi yokuxhoma kawonke-wonke ePaddy's Lane (ukunyusa idike ekhokelela eBarton Turf staithe). Isakhiwo esikwi-staithe sasikade sisetyenziselwa ukugcina imithwalo ukuze ithuthwe nge-wherry, ngoku iphantsi kwerhamente kwaye isetyenziselwa iintlanganiso kunye nemicimbi. Ecaleni kwestatithe yiCox's botyard and marina, ibonelela ngeendawo zokuhombisa kunye neenkonzo ezinxulumene nezikhephe zabucala. Ukunyuka ungene kumbindi welali, uya kufumana izindlu ezininzi ezintle ezisukela kumaxesha ahlukeneyo. Omnye umqolo onika umdla ziiCoronation Cottages, ezakhiwa ngonyaka wokubekwa kukaKumkanikazi ngo-1953. Umakhi wezakhiwo wagqiba kwelokuba amise umgca wophahla kumqolo wezindlu ezi-4 zibe ngumda wesithsaba. Izindlu zangasese bezikade zingabakwaBarton Hall, kodwa sele zithengisiwe. Embindini welali kukho ilali eluhlaza, isiziba kunye nophawu lwelali. Uphawu lwenziwe ngentsimbi ekhandiweyo ngo-1953 kwaye lubonisa iNorfolk Wherry.
INorfolk Broads ngowona mhlaba mkhulu kwaye ugqwesileyo womhlaba omanzi. Lo msebenzi ukhethekileyo wemilambo namachibi sisiphumo sokugrunjwa okunzulu kwe-peat kumaXesha Aphakathi ukubonelela ngamafutha. Imingxuma engenanto yazaliswa ngokukhawuleza ngokunyuka kwamanqanaba amanzi kwaye ngoku yenza uthungelwano olungaphezu kweekhilomitha ezili-125 zeendlela zamanzi ezinokuhamba ngenqanawa ezinikezela umdla wokuphumla kwabaninzi. Indawo yaseNorfolk Broads yenye yobuhle noxolo, yamanzi, umgxobhozo, umhlaba wemithi kunye nesibhakabhaka esibanzi-eneembono zeenqaba zecawa kunye nemimoya yomoya. Kukho intabalala yezilwanyana zasendle ezibandakanya amabhabhathane amaninzi anqabileyo kunye nohlabamanzi. Eminye yeendawo zolondolozo lwendalo inokutyelelwa kuphela ngesikhephe kunye nokukhenketha ngendlela. Ndwendwela iBroadland kwaye ungonwabela izinto ezininzi ezibandakanya iiholide zokukhwela isikhephe eNorfolk Broads, ukuhamba ngesikhephe, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa, ukusefa umoya, ukuhamba, ukuloba kunye nokuhamba ngebhayisekile. IMyuziyam yeRadar yoKhuselo loMoya yeRAF inika umbono onomdla kwimbali yophapho yelali kwaye iindwendwe ziya kufunda okuninzi malunga nommandla kunye nokusebenza kweRAF kule minyaka idlulileyo.